Koorasyada MISCA-ga: Mida ugu fiican waxaa jira. - Geofumadas
Koorsooyinka MappingGIS: ugu fiican waxaa jira.
Janaayo, 2014 ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, dhowr
MappingGIS, marka laga reebo noo soo jiidasho leh blog, waxay xooga saaraysaa qaabkeeda ganacsi ee dalab waxbarasho oo online ah oo ku saabsan mowduucyada qaab-dhismeedka geospatial.
Kaliya 2013, arday ka badan 225 waxay qaadatay koorsooyinkooda, xaddiga u muuqda mid aad u badan, iyada oo tixgelinaysa in dadaalku uu ku jiro laba ganacsade oo bilowday wax yar ka hor sannad ka hor. Sidaas awgeed waxaan ka faa'iideysanay bilawga 2014 si aan kor ugu qaadno dadaalkeeda.
Barta internetka Python ee ArcGIS 10.
Baro sida loo abuuro qoraallada si loo saxo hawlaha GIS iyo waxqabadka xogta
Sidaa darteed waxaad baraneysaa inaad isticmaasho luuqada barnaamijka Python ee habka lagu raaxeysto iyo habka mug leh. Koorsadan waxaa loogu talagalay dadka isticmaala caadiga ah ee ArcGIS kuwaas oo doonaya in ay tagaan hal tallaabo oo dheeraad ah, automating hawlaha maamulka maareynta macluumaadka, juqraafi iyo jilitaanka hareynta.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa, talaabo talaabo ah:
Ku dheji luqadda barnaamijka Python.
Abuurso qoraalladaada gaarka ah si aad ugu keydiso nidaamyada GIS ee horay loo qabtay gacanta.
Ikhtiyaarada, warbixinnada iyo weydiimaha ee GIS waxa si fudud loo soo saaraa.
Tallaabo ka timid hawlgallo yar yar oo GIS ah si loo maareynayo tiro badan oo macluumaad ah.
Maareynta iyo jiilka khariidadaha iyo taxanaha khariidadaha xitaa adigoon furin ArcGIS.
Koorsada internetka ee horumarinta codsiyada maabka internetka.
Wuxuu fuliyaa qaab dhismeedka juqraafiyeed dhamaystiran leh OpenGeo Suite
Dabcan waxaa loogu talagalay kuwa raba in ay bartaan sida si ay u horumariyaan codsiyada khariidaynta web la software il furan, ka dhoofinta xogta, maamulka iyo iyaga soo bandhiga via web soo socda heerarka Nice halkaas oo dhan.
Abuuri macluumaadka kaydka xaddidan oo samee falanqaynta figradaha leh ee PostGIS.
Diyaarso oo sameyso adeegyo xogta jimicsiga leh GeoServer.
Ka samee khariidado oo ka samee qaababka webka leh GeoExplorer.
Xulee waraaqaha sawirrada map-ka GeoWebCache.
Samee codsiyada khariidadda ee khaaska ah ee internetka leh OpenLayers iyo Buug.
Abuuri oo adeegso faylasha geoJSON si loo badbaadiyo dhismaha oo wax walba u fududeeyo.
Koorsada internetka ee khabiirka GIS: ArcGIS, gvSIG iyo QGIS.
Baro in aad maareyso saddexda macaamiisha ee ugu casrisan baahida macaamiisha ee GIS ee suuqa shaqada.
Tani waa waxbarasho ku dhamaystiran oo aad u bartaan si ay ula raster GIS iyo dulinka, saadaasha, xeerarka topology, tafatirka shaqeeyaan, abuurista symbology iyo dhidibada, khariidado Halabuurka for print iyo daabacaadda online, qalab geoprocessing iyo Model dhise ArcGIS, SEXTANTE ee gvSIG ama GRASS ee QGIS, iwm.
Ogow arjiga ArcGIS, gvSIG iyo QGIS.
La shaqee lakabyo iyo adeegyo dibadda ah.
Tafatir xogta xajinta.
La shaqee hababka isuduwidda iyo xayiraad sawirada raajada.
Abuur calaamad iyo calaamadeyn.
Samee qoraalada map.
Abuuri jaantusyada iyo bukaanka.
Samee falanqeyn aan caadi ahayn.
La shaqeynta SEXTANTE.
Soo saar khariiradaha internetka.
Koorsada internetka ee Macluumaadka Baybalka: PostGIS.
Waxay bilaabeysaa maareynta xogta ilaha bannaan ee mareegta PostGIS.
Koorsadan waxaad buuxineysaa baahidaada sida: Sida loo soo saaro shaatfeerada macluumaadka xogta? Sidee loo xoojiyaa xawaaraha jawaabta marka la fulinayo su'aalaha? Sidee falanqayntu u socotaa? Maxay tahay nooca geometry iyo nooca juquraafi? Sida loo arko macluumaadka waxa ku jira PostGIS?
Intaa waxaa dheer, waxaad ku baran doontaa qaab ahaan, talaabo talaabo ah:
Sida loo dhejiyo PostgreSQL + PostGIS
Sida loo abuuro xog-ururin oo ay ku siiso karti aan caadi ahayn
Sida loo xareeyo macluumaadka qallafsan
Sida loo arko iyo helitaanka xogta lagu kaydiyo PostGIS
Waa maxay noocyada joomatari ee jira
Sidee baan u sameeyaa falanqaynta ficilka iyo shaqooyinka xaddidan
Sida loo xoojiyo wadatashiyada
Sida loo shaqeeyo xogta raajada
Sida loola shaqeeyo xogta OpenStreetMap
Koorsada internetka ee ArcGIS.
Baro sida loo maareeyo macaamiisha GIS ee ugu baahsan iyo dalbaday macaamiisha suuqa shaqada ee adduunka.
Tani waa waxbarasho ku dhamaystiran oo aad u bartaan si ay ula raster GIS iyo dulinka, tafatir, symbology iyo dhidibada, saadaasha, georeferencing, geoprocessing shaqeeyaan, abuurista geodatabases iyo topology, khariidado Halabuurka soo daabaco iyo web daabacaadda daawadayaasha la ArcGIS online.
Koorsadan waxaad ku baraneysaa, talaabo talaabo ah:
Sida loo saxo xogta juqraafi
Sida loo shaqeeyo miisaska
Sida loola shaqeeyo nidaamyada isuduwidda
Sida loo dhejiyo sawirada raajada
Sida loo isticmaalo qalabka ArcToolbox
Sida loo sameeyo falanqaynta la Modelbuilder
Sida loo abuuro calaamad iyo calaamadeyn
Sidee loo sameeyaa falanqaynta raajada iyadoo la adeegsanayo falanqeeyaha kala duwan
Sidee loo abuuraa geodatabases
Sida loo abuuro qawaaniinta bukaanka
Sida loo daabaco khariidadaha internetka ee ArcGIS online
Koorsada internetka ee QGIS.
Baro sida loo maareeyo awoodda ugu awoodda badan ee dalbashada barnaamijka GIS ee barnaamijka suuqa shaqada ee caalamka.
Tani waa waxbarasho ku dhamaystiran oo aad u bartaan si ay ula raster iyo GIS dulinka, saadaasha, tafatir, symbology iyo Halabuurka dhidibada u shaqeeya daabacaadda maps, geoprocessing, cawska, daabacaadan online, iwm
Waa maxay GIS?
Interface QGIS Hordhaca nidaamyada isuduwidda.
Calaamadaha iyo calaamadaynta.
Soo saarida macluumaadka iyo hagaajinta miisaska.
Isdhexgalka GRASS ee QGIS.
Soo saarista khariidooyinka daabacaadda iyo daabacaadda online-ka ah.
Isdhexgalida macluumaadka macluumaadka barta: PostGIS.
Koorasyadu waxay la shaqeeyaan fasal Virtual, markaa waa la qaadan karaa wakhti kasta iyo saacadaha 24. Oo waxaan ka helnaa xiiso leh sida ay uga faa'iideysanayaan blogga iyo liiska boostada sida bandhigga wuxuu muujinayaa tayada koorsooyinkooda.
Si aad wax badan u baratid,
U tag koorsooyinka MISCS
Post Previous«Previous Sidee khariidadda dunida waxay ku jirtay 1922
Post Next BlogPad - WordPress Editor for iPadNext »
2 Jawaab in "Kombiyuutarrada MISCA-ga: ugu wanaagsan waxaa jira."
Mario isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2015 at
Waan kuu sheegi doonaa, wiil
Aurelio isagu wuxuu leeyahay:
Waa sharaf aad u soo qortay qoraal aad u dhamaystiran oo leh koorsooyinkayaga. Aad ayaannu ugu mahadcelinaynaa. TAHAY ILAALI!